ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမြေး ကားအလှဆင်တာ ဝါသနာပါသလား | Ko Oo + Ma Thandar
« တနင်္ဂနွေ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲ လောင်းကြေးများစွာ ဒိုင်စား
ဗမာတွေရဲ့ ကိုယ်တွင်း မကောင်းဆိုးဝါးများ »
Tuesday, 10 November 2009 19:08	သဲသဲ
ပြိုင်ကားပုံစံ အလှဆင်ထားသော ကားများပေါ်၌ မလုံ့တလုံ အ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင်ထားသည့် မြန်မာ မိန်းကလေးများက နိုင်ငံတကာမှ ကားပြပွဲများနည်းတူ အလှပြခဲ့သည့် ပြိုင်ကား အလှဆင်ပွဲတွင် ကားအလှဆင် ၀ါသနာပါသူတဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ မြေး ဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင် (ခေါ်) ဖိုးလပြည့်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အင်းလျားလိတ် ဟိုတယ်တွင် ပြသခဲ့သည့် ကားအလှဆင် ပြပွဲမှ မြန်မာမော်ဒယ်များ (ဓာတ်ပုံ – အေပီ)
“ဖိုးလပြည့်က ကားအလှဆင်တာ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ဒီပွဲကိုလာတာ” ဟု အဆိုပါပွဲအား သွားရောက် လေ့လာသူ တဦးကဆိုသည်။
အဆိုပါ ကားပြပွဲ မကျင်းပမီရက်အနည်းငယ်က နေရွှေသွေးအောင် (ခေါ်) ဖိုးလပြည့်သည် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်တွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်အနီးရှိ ရမဒါ ဟိုတယ်အနီး ဓားထိုးခံရပြီး တပ်မတော် စစ်ဆေးရုံအမှတ် (၂) တွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း၊ နေပြည်တော်တွင် သေနတ် ဖြင့်လုပ်ကြံခံရကြောင်း စသဖြင့် ကောလာဟလ သတင်းများ အင်တာနက် စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
သို့သော် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်၊ အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ် ကားပါကင်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ပြိုင်ကား အလှပြပွဲသို့ ၎င်းကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် အဆိုပါကောလာဟလများကို ငြိမ်သက်သွားစေတော့သည်။
နေရွှေသွေးအောင် (ခေါ်) ဖိုးလပြည့်မှာ ဖော်ပြပါ သတင်းများသာမက ယခုနှစ်အတွင်းတွင် နာမည်ကြီး မော်ဒယ် ၀တ်မှုန်ရွှေရည်၏ မွေးနေ့ပွဲ၌ စိန်လက်စွပ်နှင့်ကားတစင်း မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးသည်ဟူသော သတင်းဖြင့် ရေပန်းစားခဲ့သူဖြစ်သည်။
ပြိုင်ကားအလှဆင်ပြပွဲသို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ မြေးလည်း ယခုကဲ့သို့ တက်ရောက်ခဲ့ (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ)
နေရွှေသွေးအောင် သွားရောက် အားပေးခဲ့သည့် ပြိုင်ကားပြပွဲကို Nivea အလှကုန်မှ အဓိက ပံ့ပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး Nivea အလှကုန် ကုမ္ပဏီမှ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အလှမယ်များနှင့် မော်ဒယ်များက အလှပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါပြပွဲကို First Ever Sportcompact Automotive Event ဟူ၍ အမည်ပေးထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပသည့် ကားအလှဆင်ပြပွဲလည်းဖြစ်ကာ ကား ၂၃ စီး ပါဝင်ပြသခဲ့သည်။
၎င်းပွဲတွင်ပြသထားသည့်ကားများမှာ နိုင်ငံခြားမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းသည့် ကားများမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိပြီးသားဖြစ်သည့် MR 2၊ Supra၊ Sky line၊ RX 2၊ Mark2စသည့် ကားအမျိုးအစားများကို ပြန်လည်အလှဆင် ပြသကြခြင်းဖြစ်သည်။
“တချို့ဆိုရင် ကားအတွင်းပိုင်းတွေ၊ ခုံတွေ ပြင်ထားတာရှိတယ်။ တချို့ကားတွေကျတော့ အပြင်ပိုင်းကို ပြိုင်ကား ပုံစံ လုပ်ထားတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား ဆင်ထားတဲ့ကားတွေ ပြတာပါ” ဟုအဆိုပါ ပွဲအား စီစဉ်သူတဦး က ဆို သည်။
ယင်းပွဲအား ကိုယ်တိုင် ကားများကို ပါဝင် ပြသထားသူ ကားဝါသနာရှင် ကိုမျိုးအောင်ခိုင်ဆိုသူက အဓိက ဦးဆောင်၍ စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရ အသိုင်းအဝန်းနှင့် ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်းများ၊ ကားဝါသနာရှင်များ လာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဏာရှိသော အသိုင်းအ၀န်းမှ သားသမီးများနှင့် ငွေကြေးတတ်နိုင်သော အသိုင်းအ၀န်းမှ သားသမီးအများစုမှာ ကားအကောင်းစားများကို စိတ်ဝင်တစားဖြင့် အပြိုင်အဆိုင်စီးကြသော အလေ့အထရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ် ဝန်းကျင်ခန့်က စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးတေဇ၏ သားများသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့သွားရောက်ကာ ကားအကောင်းစားများ ထည်လဲစီး၍ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိလမ်းများပေါ်တွင် ပျော်မြူးသောင်းကျန်းခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့ခဲ့ဖူးသည်။
ဦးတေဇ၏ သားများမှာ ကားများကို စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိသော်လည်း ယခု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကားပြပွဲသို့ တက်ရောက် ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
This entry was posted on November 10, 2009 at 10:04 am and is filed under ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.